Kpido: square | Martech Zone
Azụmaahịa gị ọ na-enye nhọrọ ịkwụ ụgwọ ekwentị? Dika oru ugwo na teknụzụ mkpanaka na-abia ebe nile, ohere igbanwe olile anya n'ime onye ahia site na ugwo ugwo nke ekwenti gha adi na radar! Nkwụnye ụgwọ nke ekwentị bụ n'ụzọ doro anya teknụzụ na-ewu ewu maka azụmaahịa niile. Na 2012 enwere $ 12.8 na azụmahịa mkpanaka na US, site na 2017 ọnụọgụ ahụ ga-abụ $ 90 ijeri. Nke ahụ bụ ọnụọgụ 48% na-eto eto kwa afọ